Moobilkaagu ma gaabis yahay? Waxaan kuu sheegeynaa waxa la sameeyo si loo xaliyo | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Khiyaamada Android, Tababarada
Waxay waligeen inagu dhacday dhamaanteen moobil. Waxqabadka ay bixiso markaynu iibsanno iyo xawaaraha ay ku socoto, muddo kadib wuu lumayaa. Ilaa ay xitaa naga dhigeyso inaan lumino dulqaadkeena. Waxay kala yihiin dhowr sababood oo ka dhigaya in taleefankaaga casriga ahi noqdo taleefanka gacanta oo gaabis ah, maantana waanu kaaga warramaynaa iyaga.
Waa wax caadi u ah aaladda, markaan bilowno, inay soo bandhigto heerkeeda ugu wanaagsan hawlgalka. Kaliya maahan waxqabadka shaqeynaya, waxay sidoo kale gaartaa heerka ugu fiican ee batteriga. Ma aha in la xuso muuqaalkiisa jir ahaaneed, oo mararka qaarkood sidoo kale la dhibtoonaada waqtiga.
1 Muxuu taleefankayga gaabis u yahay?
5 Maxaan sameyn karaa si uusan moobilkeygu gaabis ugu socon?
6 Demi qalabka oo daar
7 Sii daa qalab bannaan
8 Ku celi goobaha warshadda
Muxuu taleefankayga gaabis u yahay?
Hadda bal aan guda galno sababaha taas oo ka dhigaysa taleefannadeennu inay gaabis noqdaan. Marka, adoo og waxa sababaha jira ama waxa aan qaladka ku nahay, waxaan dhigi karnaa xoogaa xal ah iyo inay soo ceshanayso heer aad u badan oo la aqbali karo oo shaqeynaya. Maxaa yeelay waa muhiim in taa la ogaado inta badan kiisaska waxaa macquul ah in taleefankeena casriga uu soo kabsado.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tahay inaan maskaxda ku hayno ayaa ah imisa sano ayuu qalabkeenu yahay. Ma filan karno in taleefannada casriga ah ee ka weyn saddex ama afar sano ay sii wadi doonaan inay ku shaqeeyaan awood buuxda. Uma jeedno tixgelin la'aanta qorshaysan ee qorshaysan, kaliya taas software-ka ugu horumarsan, mararka qaarkood sidoo kale waxay u baahan yihiin qalab si ay u dhigmaan.
Sidoo kale waa inaan kala saarno haddii qalabku si dhakhso leh u soo bandhigo dhibka xagga hagida by internetka. Ama gaabiska aynu ka hadlayno ayaa loola jeedaa dheecaan yar oo ay ku dhaqaaqdo xitaa liiska gudaha. Waxaan lahaan karnaa caymis ama xitaa calaamado dhibaatooyin ah oo naga dhigi kara inaan rumaysanno in taleefanka uusan si fiican u shaqeyneynin iyada oo taasi aysan run aheyn.
Halkan waxaan ka heli mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aaladdu hesho waxqabadka ugu wanaagsan. Markii aan bilawno moobaylka, sida caadiga ah waxaan ka helnaa boqolkiiba sare oo keyd ah oo la heli karo. Kaydso taas iyadoo bilaha ama sannadaha la isticmaalayo la dhammaystiray mararka qaarkood xitaa si buuxda u degan.
Faylal aan badnayn, codsiyo yar, iyo meelo badan oo bilaash ah ayaa wadada u xaaraya waxqabadka nidaamka hawlgalka ee ugu habboon. Sida caadiga ah, taleefan casri ah oo leh ku dhowaad xusuus buuxda ayaa noqda taleefan casri ah. Nidaamka qalliinka wuxuu la kulmaa caqabado badan si uu si caadi ah ugu shaqeyn karo. Iyo inaad yeelato waxqabad "caadi ah" waxaad u baahan tahay qayb ka mid ah xusuusta la heli karo.
Waa maxay waxa ugu fiican ee la sameeyo xilligan? Mar baan tiriney iyadoo xusuusta qalabka gabi ahaanba ay buuxsan tahay waxaa jira fursado dhowr ah oo la heli karo si loo yareeyo culeyska xogta keydsan. Dhamaadka boostada waxaan ku siineynaa talooyin wax ku ool ah si aad mobiilkaaga ugu soo celiso siduu ahaa. Shaki la'aan, mid ka mid ah ficilada ugu waxtarka badan waxay noqon doontaa in gebi ahaanba la tirtiro dhammaan faylasha, codsiyada, sawirada, iwm. Laakiin haddii aad dareento sida hawl caajis ah iyo xitaa caajis sidoo kale waxaa jira xulashooyin lagu sameeyo dhowr talaabo oo fudud. Haysashada aaladda sidaan u sii deynay waxay ka dhigeysaa inay dib u cusbooneysiiso hab aad u cajiiba oo waad awoodi doontaa ku raaxee taleefankaaga mar labaad sida ugu dhow ee uu cusub yahay.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee ku dhici kara taleefannada casriga ah waa in soo saaruhu go'aansado inuu "gooyo" cusbooneysiinta moodelkeenna gaarka ah. In kasta oo waxa aadka u muuqda ay tahay taas ma heli doonno cusbooneysiin xagga amniga ah. Runta ayaa ah in cusboonaysiintaani sidoo kale ay ka dhigayaan aaladda in la sii cusbooneysiiyo marka la eego waxqabadka iyo shaqeynta.
Ku xisaabtam wax ka yar cusbooneysiinta nidaamka qalliinka waxay sidoo kale bilaabaysaa inay naga tagto dhinacyada cusbooneysiinta dalabyada kala duwan ee la jaan qaadaya nidaamka hawlgalka. La shaqee noocyada hore ee codsiyada waxay kaloo sababi kartaa inaan seegno xulashooyinka cusub ama aan sameysano ha u shaqeyn si caadi ah.
Marar badan, waqtiga wax iibsiga casriga cusub, noocyadii hore ee koofiyadaha dhamaadka ayaa lagula talinayaa shirkadda shaqada ku jirta. Sida caadiga ah, tani waa fikrad wanaagsan tan iyo sannad ka dib, waxa ahaa mobiil aan caadi ahayn ayaa sii wadi doona inuu ahaado mid aad u fiican. Laakiin haddii aan eegno nooc duug ah, weli sidoo kale waxaan u rogeynaa casriga casriga ah ee dhinacyada badan, waxaan ku khaldami karnaa helitaanka qalab dhowaan laga tagi doono wixii cusbooneysiin ah.
ka codsiyada, oo ay weheliyaan sawirrada, waxay maareeyaan inay qabsadaan qayb weyn oo ka mid ah xusuusta moobiilladayada. Waxaan dooneynaa inaan helno codsiyo wax walba, dhowr si aan u sameyno, dabcanna waxaan leenahay waxyaabaha lagama maarmaanka ah iyo codsiga xilligan. Tani waa aasaaska nidaamka qalliinka iyo taleefannada casriga ah ayaa loogu talagalay iyaga.
Araajida wax badan ayey isbeddeleen iyo cusbooneysiin kasta hagaajiyo dhinacyada loogu talagalay in laga dhigo khibradaha isticmaalaha mid soo jiidasho leh. Tani waxba kama qabanayso laakiin ku mashquulsan boos aad u badan oo taleefannadeenna ah. Iyo in yar oo yar, heer noocan oo kale ah baahi dhaqaale, isticmaalka xasuusta iyo walxaha aasaasiga ah samee waxqabadka hoos u dhaca.
Si aad go'aan uga gaartid hal ama codsi kale, horumariyayaashu waxay ku dadaalayaan inay iyaga ka dhigaan kuwo soo jiidasho leh intii suurtagal ah. Markasta oo ay leeyihiin muuqaalo badan iyo ikhtiyaarro badan oo loo isticmaalo. Tan, marka laga soo tago iyaga oo aad u kala duwanaan badan, waxay ka dhigeysaa inay qabsadaan boos aad iyo aad u badan isla markaana isla markaa cunaan ilo badan
Maxaan sameyn karaa si uusan moobilkeygu gaabis ugu socon?
Marka hore, waa muhiim in taa la ogaado dhibaatada gaabiska qalabkeenna, had iyo jeer waxay leedahay xal. Way muuqataa, sidaan bilowgiiba uga faallaynay, haddii aan nahay leh taleefan horey u jiray dhowr sano, qolka hagaajinta ayaa aad u xaddidan. Qaybaha jirka ee kujira taleefanka sidoo kale way sii xumaanayaan, taas oo "lagu xumeynayo" oo ay weheliso softiweer iyadoo aan la cusbooneysiin.
Laakiin haddii taleefankaaga casriga ahi aanu duugoobayn, oo aad u aragto in aanu sidii la rabay u qabanayn. Ama haddii aad aragtay waxqabad ka xun oo moobiilkaga ka dhigaya mid gaabis ah, marka loo eego sidii ay ahayd markii aad sii deysay, waanu ku siin doonnaa talooyin qaarkood oo ka dhigi kara inay u shaqeeyaan sidii ay markii horeba ahaayeen. Moobilkaagu ma gaabis yahay? Waxaa laga yaabaa in muddo gaaban ...
Demi qalabka oo daar
Waxay umuuqataa doqon, waana dhici kartaa mana shaqeyn doonto. Laakiin waxaa jira in badan oo inaga mid ah oo taleefanka maanaan dansan toddobaadyo. Kadib markaan socodsiino maalin dhan, markaan seexanayno, waan iska daynay ku xiran xeedho adiga oo aan dansan. Haddaan tan u samaynno caado ahaan, moobilku wuxuu dhaafayaa stoddobaadyo dhan oo aan dami iyo shidin.
Haddii ay taasi tahay kiiskaaga oo aad ka mid tahay kuwa aan waligood taleefanka daminin waxaa mudan in laysku dayo, maadaama ay fududahay oo aan wax kharash ah ku bixinayn in la sameeyo. Dhowr ilbiriqsi oo taleefanku dansan yahay ayaa gebi ahaanba sameyn kara nidaamka ayaa dib loo dhigay, waa khasnado nadiif ah iyo xirid gebi ahaanba Barnaamijyada laga yaabo inay ku soo jiidayaan ilaha xagga dambe.
Sii daa qalab bannaan
Sidaan kuu sheegnay isticmaalka xad dhaafka ah ee xusuusta taleefanka ayaa saameyn weyn ku yeelan kara howlaheeda. Dib u eegida codsiyada aan ku rakibnay aaladda badbaadada waxaan helnaa qaar anaga oo aan isticmaalin waqti dheer. Ka tirtiro barnaamijyada naadirka ah had iyo jeer waa fikrad wanaagsan.
Waxaan si dhaqso ah ku helnaa boos, iyo marwalba waan soo dejisan karnaa markale haddii aad u baahatid iyaga Iyo haddii aan rabno inaan ku helno barnaamijyada ugu badan ee la isticmaalo taleefannadeenna, sidoo kale waxaan ku rakibi karnaa noocyada "iftiinka" ee Barnaamijyada. Waqti kasta oo aan helno codsiyo badan oo aqrin ah, oo badankood shaqeynaya laakiin leh xusuus aad u yar. Ma saas tahay Facebook Lite, mishiinka raadinta Google Lite, ama Messenger Lite, tusaale ahaan.
Sawiradu waa mid kale oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee xusuusta mobilada ay ku badan yihiin. Xal degdeg ah, bilaash ah oo aad loogu kalsoon yahay ayaa ah sawirradaada u gudbi Sawirrada Google, tusaale ahaan. Hadaad qandaraas leedahay adeegga kaydinta mise waxaad doorbideysaa inaad kala soo baxdo iyaga kombuyuutar sidoo kale waa ikhtiyaarro. Adigoo sii deynaya waxoogaa Gigas ah oo ay kujiraan sawirrada, taleefanka ayaa bilaabaya inuu si xor ah u qulqulo.
Ku celi goobaha warshadda
Tani waa mid ka mid ah xulashooyinka "xagjirka ah". Ku celi goobaha warshadda waxay ku lug leedahay gebi ahaanba tirtiro dhammaan macluumaadka taleefanka. Dabcan waa super muhiim u ah in la sameeyo keyd horay u ah dhammaan faylasha muhiimka ah. J) Haa runtii waan hubin karnaa sida ay u shaqeysay bilowgii moobilkeena.
Tirtirida wax walba waxaan hubinaa inaan baabi'inay cilladaha suurtogalka ah. Sidoo kale waan ka saareynaa dhammaan malware-yada laga yaabo inay ogaal la'aan ku rakibeen taleefanka gacanta. Shaki la'aan, dib udajin sWaxay ku sameyn doontaa isbedel aan caadi aheyn habka qalabka uu u shaqeeyo.
Waxaan u baahan doonnaa inaan dib-u-dhigno barnaamijyada ugu muhiimsan ee xoqidda. Sidaa darteed, haddii ay jiraan codsiyo qaarkood oo aanaan xasuusnayn ama aanan u baahnayn, si cad way u dhammaadeen. Tirinta kaydinta Google Drive, hawshu way ka dhakhso badan tahay sida ay u muuqato. Oo naso inaad hubiso in haddii mobiilkaagu gaabis yahay, dib u soo celinta goobaha warshaddu u qalanto. Sida aan aragno, iyagu waa tallaabooyin kala duwan oo aan qaadi karno inaan isku dayno inaan ka dhigno taleefankeena casriga ah inuu dib ugu noqdo sidii uu ahaa. Haddii aad leedahay mobiil gaabis ah, hubi inaad tijaabiso ka hor intaadan u dhiibin wax dhintay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Moobiilkeygu waa gaabis yahay
Xiaomi Mi Watch: Raadinta qiimaha lacagta